UMkhandlu Ophethe we-UNWTO Uyacacisa: Incwadi entsha evela eChile
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » UMkhandlu Ophethe we-UNWTO Uyacacisa: Incwadi entsha evela eChile
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Zokusakaza ZaseChile • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • ezithrendayo Manje
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseChile ungummeli. Njengenhloko yesigungu esiphezulu se-UNWTO, uthathe isinyathelo esibalulekile izolo. Ukubeke kwacaca ukuthi isigungu esiphezulu besisebenza ngaphansi kweMithetho ye-UNWTO ngesikhathi kukhethwa uZurab Pololikasgvili ngoJanuwari. Abameli bangafunda phakathi kwemigqa.
UMnu. Campos uchaze kahle ukuqhubeka koMkhandlu oPhethe wahlangana futhi saqhubeka ngokususelwa emithethweni ye-UNWTO, yini ngempela akekho owake wayibuza.
Phela akulona iphutha lesigungu esiphezulu se-UNWTO, uma i-UNWTO General Assembly ingakwazi ukuqinisekisa isinqumo esithathwe yibo, ikakhulukazi lapho isimo sesishintshile, futhi i-Executive Council yayingazi nhlobo ukuthi yini ezoshintsha phakathi nosuku isinqumo. kwenziwa kanye noMhlangano Jikelele.
Kungacatshangwa ukuthi isizathu sokuba nezinyanga ezimbalwa phakathi kwesinqumo kanye nokuqinisekiswa ukuvumela ncamashi ukuthi izinguquko zicatshangelwe.
Manje sekusengqungqutheleni ezayo Yenhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba (UNWTO) ezinsukwini ezimbalwa eMadrid ukuze uqinisekise noma ungasiqinisekisi izincomo zoMkhandlu Ophethe kusukela ngoJanuwari walo nyaka.
Uma ubheka i-UNWTO, uma ubheka uNobhala-Jikelele I-Pololikashvili, futhi lapho ubheka ukuthi amalungu oMkhandlu oPhethe acabanga kanjani namuhla, kubonakala sengathi singase sisemhlabeni ohlukile, uma kuqhathaniswa nalapho sasikhona ngoJanuwari, noma ngaphambi kukaSeptemba.
Amalungu angama-33 oMkhandlu oPhethe okuyilawa 1. Saudi Arabia – 2. Algeria – 3. Azerbaijan- 4. Bahrain – 5. Brazil- 6. Cape Verde – 7. Chile- 8. China – 9. Congo – 10. Ivory Coast – 11. Egypt – 12. Spain – 13. Russian Federation – 14. France – 15. Greece – 16. Guatemala – 17. Honduras – 18. India – 19. Islamic Republic of Iran- 20. Italy – 21. Japan – 22. Kenya- 23. Lithuania- 24 .Namibia – 25. Peru – 26. Portugal – 27. Republic of Korea – 28. Romania- 29. Senegal – 30. Seychelles – 31. Thailand – 32. Tunisia – 33. Turkey – yasebenza ngokwethembeka nangaphansi kwemithetho eqinile ebekiwe uma kuvotwa ngoJanuwari.
Ngaphansi kwemithetho yamanje, ukuqinisekiswa kwalesi sincomo kuyadingeka nge-2/3 iningi le-General Assembly ezayo.
Unobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili ubeke isigungu esiphezulu endaweni, wabeka isikhathi esifushane somhlangano wokhetho. Lokhu kunqunywe emhlanganweni wesigungu esiphezulu ezweni likaNobhala-Jikelele, iGeorgia ngonyaka odlule. Lokhu kwaphinde kwaphakamisa amashiya ngaleso sikhathi.
UNgqongqoshe waseChile ubengaholi 112 kwe. Isigungu esiphezulu ngesikhathi kuthathwa lesi sinqumo ngoSepthemba nyakenye eGeorgia.
Imihlangano yoMkhandlu oPhethe ngokuvamile ayibanjelwa ezweni likaNobhala-Jikelele.
Ngaleso sikhathi uMhlonishwa. UNajib Balala waseKenya nguyena obephethe. Akuyona imfihlo ukuthi uBalala njengamanje weseka uNobhala-Jikelele ekuqinisekiseni kwakhe ngesonto elizayo.
Ngenxa yalesi sinyathelo, munye kuphela ikhandidethi wase-Bahrain okwazile ukungena emjahweni cishe alikho ithuba lokukhankasa ngesikhathi sokuvalwa kwe-coronavirus emhlabeni jikelele. Akazange abe nethuba elingokoqobo, futhi abanye abantu abangu-6 abakwazanga ukukhiqiza amaphepha ngokushesha ngokwanele phakathi nesikhathi esifushane, nangesikhathi sokukhuphuka kwe-COVID-19 ukuze bangenele umjaho. Lokhu kwakuhlanganisa ilungu lebhodi le-WTN kanye nowayeyisikhulu esiphezulu seBhodi Lezokuvakasha laseNepal u-Deepak Joshi.
Ukube bekunethambo lokungachemi esigungwini sikaNobhala-Jikelele ubezocela ukuthi uhlelo lokhetho lwelulwe kuze kube nguMeyi. Esikhundleni salokho, waphusha isikhathi esifushane kakhulu sokuthi uMkhandlu oPhethe uphinde uhlangane futhi uvotele yena. Kumele ukuthi wayeqinisekile ukuthi ngeke abhekane nomqhudelwano onzima ngoJanuwari - futhi akazange abhekane.
Lapho isizathu sokuqala sokususa ukhetho kusukela ngoMeyi kuya kuJanuwari sesiqediwe, okungukuthi umbukiso wezohwebo weFITUR, uNobhala-Jikelele wayengakunaki lokho. isicelo ngisho nangemva kokuba incwadi evulelekile yamukelwe yilabo ababengoNobhala Jikelele ababili, ngabaholi ababehlanganisa amagama afana noCarlos Voegeler, Solwazi Geoffrey Lipman, Louis D'Amore nabanye. Le ncwadi inxuse uNobhala-Jikelele ukuthi aqhubekisele phambili umhlangano wokhetho wesigungu esiphezulu kuze kube usuku lokuqala noma kangcono ngale kwalokho.
UNobhala-Jikelele wayazi kahle kamhlophe ukuthi ukuvumela isikhathi esengeziwe kwakuyovula inkundla yokuncintisana. Esikhundleni salokho, utshale yonke imizamo yakhe eholela emhlanganweni wesigungu esiphezulu sikaJanuwari ukuze abhekelele amazwe omkhandlu ophethe kuphela, eshiya amanye amazwe angamalungu e-UNWTO kanye nenkinga ye-corona, edinga ukubambisana nezinkampani ezizimele, ikakhulukazi i-WTTC eceleni.
Lapho uNdunankulu waseGeorgia ebambe isidlo sakusihlwa eMadrid ngobusuku bangaphambi kokhetho, omele ukhetho lwaseBahrain wahlala engekho embhikishweni.
Ngokusobala, lesi sinyathelo sasebenzisa inqubo enobulungiswa, kodwa kungenzeka ukuthi konke lokhu kwakungaphakathi kwesethi yemithetho nezinqubomgomo. Kunjalo, izimiso nezinqubomgomo ezinjalo zabekwa lapho umhlaba ungazi ngeCoronavirus.
Njengoba kuchaza uMhlonishwa. Unobhala-Jikelele u-Francesco Frangialli ku-hincwadi evulelekile eshicilelwe kuleli sonto, ukuba semthethweni akwanele.
Ekulawuleni inqubo, ungaba semthethweni futhi uziphathe kabi.
Inqubo yokhetho ingaba ngokusemthethweni ngokuhambisana nemithetho, kodwa ngesikhathi esifanayo ingalungile futhi ingalingani. Ekupheleni kosuku inqubo ngeke ibe nesimilo.
Njengoba uSophocles abhala: “kukhona iphuzu lapho ngisho nobulungisa buphenduka ubulungiswa".
Incwadi evulelekile yesibili eyethulwa ngowayengunobhala - ojenene mayelana nokutholwe yikhomishana yezimiso zokuziphatha, futhi lokho okutholakele kufanele kube isizathu sanoma yiliphi ilungu elinomqondo ovulekile ukuthi lithi “ma kancane”
Maningi-ke amaqiniso isiGungu esiPhezulu ebesingawazi ngesikhathi sivotela uZurab Pololikashvili
Iqiniso lokuthi i- Izinkulumo ezithusayo nezibucayi zesikhulu sezokuziphatha embikweni wakhe oya ku-General Assembly, nokuthi izikhulu eziningi zangaphambili ze-UNWTO ezisezingeni eliphezulu zithatha isinyathelo futhi zabhala incwadi evulekile eqondiswe emazweni angamalungu kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okungahambi kahle ku-UNWTO.
Ukukhohlisa, ukuhlukunyezwa kwabasebenzi, iqiniso lokuthi ukugxekwa akuvunyelwe ku-UNWTO kuvele obala ngemuva kombiko weKhomishana Yokuziphatha.
Lo mbiko ubungaziwa kuMkhandlu oPhethe ngesikhathi uvotela uZurab:
Lesi sigaba sombiko wezimiso zokuziphatha siyakufingqa:
Njengoba iminyaka engaphezu kwengu-35 yenkonzo ngaphansi konobhala abajwayelekile abayisithupha BeNhlangano, okungaphezu kweminyaka engu-20 yayo inikelwe ezimisweni zokuziphatha nokuzibophezela komphakathi, Isikhulu Sezimiso Zokuziphatha njengamanje siyisikhulu esinesevisi ende kunazo zonke e-United States. inhlangano.
Ngenxa yalesi sizathu, ngikwazile ukubheka ngokukhathazeka nokudabuka okukhulayo ukuthi imikhuba yangaphakathi esobala eyayikhona ezikhundleni zokuphatha, phakathi kwezinye izinto, mayelana nokukhushulwa, ukuhlelwa kabusha kwezikhundla nokuqokwa, kuphazamiseke kungazelelwe, kwashiya isikhala esanele opacity kanye nokuphathwa ngokungafanele.
Iqiniso lokuthi amalungu amaningi oMkhandlu oPhethe ofanayo manje aseseka incwadi yalabo ababengoMabhalane-Jikelele ababili ngokusobala nangemuva kwesigameko kufanele kunikeze isizathu esanele kuwo wonke amazwe ahloniphe okutholwe yiKhomishana Yokuziphatha ukuthi athi:
Linda umzuzu nje…
… futhi uvumele ukubheka kwesibili futhi uqaphele izinguquko ezinkulu ezenzeka phakathi nesikhathi uZurab aqinisekiswa ngaso Isigungu Esiphezulu ngoJanuwari, kanye nesimo i-UNWTO ebhekene naso namuhla.
Njengoba kushiwo nguFrancesco Frangialli ithemba lakhe liwukuthi, i-General Assembly, esikhundleni sayo "sesigungu esiphezulu" se-UNWTO, sizokwenza okudingekayo ukuze kuqinisekiswe ukhetho olunobulungiswa eMadrid kanye nokubuyela ekuphathweni okuhle kweNhlangano.
Incwadi esanda kuthunyelwa ngoNovemba 24 yiNhloko yoMkhandlu oPhethe we-UNWTO owahlangana ngoJanuwari 2021 ithi:
Amazwe Angamalungu Athandekayo,
Inqubo yokhetho phakathi kwabangenele ukhetho eyethulwe oHulumeni baseBahrain naseGeorgia, eyenziwa ngesikhathi seseshini ye-113 yoMkhandlu oPhethe, ihambisane nawo wonke amaphuzu neSitatimende, ngenqubo esungulwe uMkhandlu oPhethe embhalweni CE/112/6 rev. .1, kanye neMithetho yeNqubo yoMkhandlu oPhethe kanye neMithetho Ejwayelekile Yokhetho Ngevoti eliyimfihlo le-UNWTO.
Kulolu Khetho olushiwo, obeluqhutshwa ngevoti eliyimfihlo ngamaLungu oMkhandlu oPhethe agunyazwe ngokusemthethweni ngokwethula izicucu ezisemthethweni ezikhishwe oHulumeni babo, beluhanjelwe Amalungu angama-33 kwangu-34 oMkhandlu oPhethe abekhona emhlanganweni, asevele ebaliwe ngenhla.
Ekugcineni, phakathi neseshini ye-113 yoMkhandlu oPhethe, indikimba yanquma ukuncoma uMnu Zurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele weNhlangano kusukela ku-1 January 2022 kuya ku-31 December 2025, ngesisekelo saleso sincomo umphumela wemfihlo. ivoti phakathi kukaNks Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Candidate of the Kingdom of Bahrain, othole amavoti 8, noMnu Zurab Pololikashvili, Candidate of State of Georgia, othole 25 amavoti.
Kukho konke lokhu okungenhla nangesikhundla sami njengoMongameli woMkhandlu oPhethe, ngiyaqinisekisa ukuthi ngalesi sikhathi sobumongameli zonke izenzo ezenziwayo zilungisiwe zibe yiMithetho nemithetho yamanje, kube wukhetho olwenziwa uMkhandlu oPhethe emhlanganweni wawo odlule inqubo. ehambisana nemithethonqubo.
Ngokubheka lokhu okungenhla, kanye nokuhlonipha imiphumela yevoti ebiseseshini ye-113 yoMkhandlu oPhethe, ngiyaphinda ngiyagcizelela ukuthi uMkhandlu oPhethe weNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba, ngokuhambisana nezinhlinzeko zeSigaba 22 seMithetho kanye neSigaba 29 soMthethosisekelo. Imithetho yenqubo yoMkhandlu oPhethe, incoma kuMhlangano Jikelele uMnu. Zurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele ngesikhathi sika-2022-2025.
Ngaphandle kokunye, ngikhuluma ngokucabangela kwami ​​okukhulu nokuhlonishwa kwami.
Umongameli woMkhandlu oPhethe we-UNWTO,
U-José Luis Uriarte Campos ungummeli wase-Universidad de Los Andes futhi uneziqu ze-master in Public Policy azithola e-Universidad del Desarrollo.
Njengoba cishe iminyaka engu-20 yesipiliyoni, unomsebenzi owaziwayo emhlabeni womphakathi, egqamisa umsebenzi wakhe njengenhloko yabeluleki ku-Ministry of Economy, Development, and Tourism; induna yendawo eMnyangweni Wezemisebenzi Yomphakathi kanye noMqondisi Kazwelonke we-Sercotec.
Ngo-2014 usebenze njengoNobhala-Jikelele we-National Chamber of Commerce, Services and Tourism, echaza amasu amasha omsebenzi kanye nokweseka lo mkhakha.
Namuhla usebenza njengonobhala Ongamele Wezokuvakasha, okuyibhizinisi elincike kuNgqongqoshe Wezomnotho, Intuthuko, Nezokuvakasha.
Kufanele kuqashelwe, ukuthi ngokwemithombo ethembekile ye-eTN le ncwadi ibhalwe ngu-Alicia Gomez, umeluleki wezomthetho we-UNWTO, futhi yanikezwa ungqongqoshe eChile ukuthi ayisayine.
Izithunywa ze-UNWTO kufanele ziphathe ngokuzibophezela futhi zihlole wonke amaqiniso. Uma kungenjalo umhlaba wezokuvakasha kuzodingeka uphile iminyaka emi-4 nemiphumela.